Paaifamba kwose, isu tese tinoda mukana wekuenda kunotenga pachedu, mhuri neshamwari! Zvinofadza yakasiyana mune imwe nyika, handitika? Kana totaura Europe, kunotenga hainyadzisi. Haangooni here kuva nomukurumbira maguta kunotenga akadai London uye Milan, inotova nenzvimbo zhinji dzekutengesera dzinopa zvikwereti zvakakura pamugwagwa wepamusoro kusvika kumagumo emhando yepamusoro. Below isu umboo 5 Of The Best Shopping nehoro In Europe.
Discover rakasiyana kunotenga ruzivo mune imwe panze marongero ari La Vallee Village pedyo Paris. Kune zvinopfuura 110 boutiques yefashoni inozivikanwa pasi rese. Kunewo mararamiro pezvitsiga chipiriso zvavaimboita mwaka muunganidzwa pa kwakaderedza mitengo, gore rose.
Musha ndewe kumba kune zvinopfuura 110 boutiques ose nomukurumbira pezvitsiga kusanganisira – Armani, Calvin Klein, Carven, Charles Tyrwhitt, CH Carolina Herrera, chitima, Diane Von Furstenberg, Fred Perry, Furla, kufembera, Hackett, Jimmy Choo, Kenzo, Longchamp, Marni, Michael Kors, Moncler, Paul & Joe, Paul Smith, Poiray, Roberto Mugabe Zimbabwe, Salvatore Ferragamo, S.T. Dupont, Sandro, Superdry, Ted Baker, Tods, Tommy Hilfiger, The Kooples, Tumi, UGG, Vanessa Bruno, Yves Salomon, Zadig & Voltaire uye akawanda zvekuti hatikwanise kuvadoma vese.
A mazita Best Shopping nehoro mu Europe haagoni kusiya kubuda Milan! Kana iwe uri kutsvaga yepamusoro-kumagumo kutenga, Milan inowanzove iri pamusoro pezvinyorwa zvevanhu vakawanda. Wanga uchiziva here kuwana bargains uri vakapiswa kunotenga zvakare? Shanyira Serravalle Mugadziri Outlet nokuda discounts pamusoro guru uye refu mumugwagwa fashoni pezvitsiga.
Get yepamusoro European mugadziri fashoni, midziyo, kana zvishongedzo zvekumba zve 30% kuti 60% zvishoma. Mazuva vagadziri kutsva yavo yakasara uye pamwaka zvinosara vari refu aenda. Factory nzira yokubudisa zvitoro zvino inowanzonzi ukatakata pakati wakajeka madiki kusvika pakati nepakati. Uyewo kumativi mumadhorobha nzvimbo uye, nokuti zvose munoziva, pamwe zvakanaka musuo inotevera! Pikiniki uye chikwama chitsva chero munhu?
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Of The Best Shopping nehoro In Europe” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-shopping-outlets-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)